NVIDIA KAADỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA VIDIYO NA-AGBAJI: IHE Ị GA-EME - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Troubleshoot nkwụsị NVIDIA ndị ọkwọ ụgbọala
Maka ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke kaadị vidiyo chọrọ ngwanrọ pụrụ iche, nsụgharị ya ugbu a. Ọtụtụ mgbe na ngwaahịa NVIDIA, ọ na-eme na ndị ọkwọ ụgbọala na-apụ n'ihi enweghị ihe kpatara ya.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ọkwọ ụgbọelu NVIDIA na-efe
E nwere ọtụtụ ụzọ isi dozie nsogbu a, a ga-atụle nke ọ bụla na nke a n'isiokwu a.
Usoro 1: Dezie onye ọkwọ ụgbọala ahụ
Nke kachasị mfe, ya mere, nke mbụ, ụzọ bụ onye ọkwọ ụgbọ ala ntinyeghachi. Ọbụna onye ọkwọ ụgbọala ahụ n'ezie na nke a, ị ga-ebu ụzọ wepu.
Mbụ ị ga-aga "Onye njikwa ngwaọrụ". Ụzọ kachasị mfe: "Malite" - "Ogwe njikwa" - "Onye njikwa ngwaọrụ".
Ọzọ, chọta ihe ahụ "Ihe ntaneti vidiyo", anyị na-eme otu mkpụrụedemede, mgbe e mesịrị kaadị vidiyo awụnyere na kọmputa ahụ gosipụtara. Pịa ya na bọtịnụ òké aka ma họrọ ihe ahụ "Njirimara".
Na windo "Njirimara" chọta isi ihe "Ọkwọ ụgbọala". Mee otu pịa. Na ala ga-abụ bọtịnụ "Hichapụ". Pịa ya ma chere maka iwepụ kpamkpam nke ọkwọ ụgbọala ahụ.
Echegbula banyere nchekwa nke omume ndị dị otú ahụ. Mgbe mmadụ zuru oke, Windows ga-arụnye ọkwọ ụgbọala ọkọlọtọ na-akpaghị aka. Ọ ga-adị mkpa ruo mgbe usoro ahụ na-achọpụta NVIDIA software.
Ọ na - eme na ntinye ngwanrọ adịghị ezi, nke nwere nsogbu na nsogbu ọ bụla na arụ ọrụ nke ngwaọrụ ahụ. Ihuenyo enyo, gbanyụọ onyinyo ahụ, na-ekpochasị foto - a ga-edozi nke a naanị site na ịtinye ngwanrọ ahụ. E nwere nnukwu isiokwu na ebe nrụọrụ weebụ anyị maka otu esi edozi ndị ọkwọ ụgbọala maka NVIDIA kaadị vidiyo. Anyị na-akwado ka ị gụọ ya.
Gụkwuo: Ịwụnye ọkwọ ụgbọala na NVIDIA GeForce Ahụmahụ
Otú ọ dị, nke a abụghị panacea maka nsogbu a. Ọtụtụ mgbe, kaadị vidio ahụ adịghị aghọta ọkwọ ụgbọala ọhụrụ. O siri ike ikwu ma nke a bụ mmejọ onye mmepụta ma ọ bụ ihe ọzọ. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị mkpa iji rụọ ọrụ a, nakwa maka nke a, ị ga-achọ ịwụnye ngwanrọ agadi. Nke a na-esiri m ike karịa nwelite ma ọ bụ weghachite ya.
Iji malite, gaa na NVIDIA website nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ọzọkwa na ntinye isiokwu anyị na-ahụ ngalaba. "Ọkwọ ụgbọala".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ dịghị anyị mkpa ịkọwa ihe nlereanya nke kaadị vidiyo, ebe ọ bụ na anyị anaghị achọ onye ọkwọ ụgbọala n'ezie, mana onye na-akwọ ụgbọala. Ya mere, anyị na-ahụ eriri ahụ "BETA ndị ọkwọ ụgbọala na nchekwa".
Ma ugbu a, ọ dị anyị mkpa ịkọwa kaadị vidiyo nke arụnyere na kọmputa ahụ. Ịkọwaa ozi dị mkpa gbasara nkwụnye na sistemụ arụmọrụ, pịa "Chọọ".
Tupu anyị enwee ebe nchekwa nke ndị ọkwọ ụgbọala. Ọ kachasị mma ibudata nke kacha nso na ugbu a na akara dị ka "WHQL".
Iji budata pịa aha software ahụ. A windo meghere ebe anyị chọrọ pịa "Download ugbu a".
Ọzọ, anyị na-enye ịgụ nkwekọrịta ikike. Pịa na "Nabata ma budata".
Mgbe nke a gasịrị, ibudata faịlụ EXE amalite. Chere ruo mgbe ibudata zuru ezu ma mee ya.
Nke mbụ, usoro ihe a ga-agwa gị ka ị kọwaa ụzọ maka ntinye, na-ahapụ nke otu.
Ọzọ, mmeghe nke faịlụ ndị dị mkpa amalite, mgbe nke ahụ ka ntinye nke ọkwọ ụgbọala ga-amalite, ya mere, ọ ka na-echere.
Na njedebe, nanị ị ga - achọ ịmalitegharịa kọmputa maka mgbanwe ndị ị ga - eme. Ọ bụrụ na usoro a enyereghị gị aka, mgbe ahụ ị kwesịrị ịṅa ntị na ihe ndị ọzọ kpatara nsogbu ahụ, nke a kọwara n'okpuru ebe a.
Nzọụkwụ 2: Chọọnụ mmeri oke
Nsogbu kachasị mma nke kaadị vidiyo na-ekpo oke. Nke a na-egosi nke ọma na onye ọkwọ ụgbọ ahụ na-efe naanị n'oge egwuregwu ma ọ bụ usoro usoro-achọ. Ọ bụrụ na nke a abụghị ụdị gị, mgbe ahụ, ị ​​gaghị agafe n'ihu, n'ihi na a ka chọrọ nkwenye. Na saịtị anyị, ị nwere ike ịchọta otu edemede nke na-enye ihe atụ nke usoro ihe omume kachasị mma na ụlọ ọrụ nwere ike nyochaa ọnọdụ okpomọkụ nke kaadị vidiyo.
Gụkwuo: Nyochaa ọnọdụ okpomọkụ nke kaadị vidiyo ahụ
Ọ bụrụ na a nwalere ule ahụ, ọ pụtara na kaadị vidiyo na-ekpocha ọkụ, mgbe ahụ, a ghaghị ịhazi usoro dum iji meziwanye ọnọdụ ya.
Lelee ịdị ọcha nke usoro usoro ahụ, ịdabere na nlekota onye nlekota ọ bụla na arụmọrụ ya. Ọ bụrụ na ịchọta na oke uzuzu dị n'ebe onye ahụ na-akwado ya ma ọ gaghị ekwe omume ịnweta ya, mgbe ahụ, ọ kacha mma iji wepụ ihe nkedo ahụ wee kpoo ya.
Iji meziwanye ikuku na ikuku usoro site na ịwụnye ndị ọzọ na-ekpo ọkụ.
Wepụ ihe omume ndị na-ekpuchi kaadị vidiyo ahụ, ma ọ bụ kpochapụ ha.
Imirikiti nsogbu na mkpuchi ọkụ ga-alaghachi ma ọ bụrụ na i soro nzọụkwụ n'elu. Otú ọ dị, nsogbu onwe ya na ọpụpụ nke onye ọkwọ ụgbọala ahụ nwere ike ịnọgide na-aba uru. Ọ bụrụ otú ahụ, gaa n'ihu usoro ndị a.
N'ikpuchi kaadị vidiyo, ọ bụrụgodị na ọ bụ mmepụta ihe, ọ naghị ekwe nkwa ọrụ ngwa ngwa. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ka ngwaọrụ ahụ dịkwuo gị mma, gbanyụọ niile accelerations.
Nzọụkwụ 3: Wepụ nsogbu ọkwọ ụgbọala na ngwa ndị pụrụ iche
Nsogbu siri ike bụ esemokwu dị n'etiti onye ọkwọ ụgbọ ala na ngwa ndị awụnyere maka kaadị vidiyo ahụ. Nke mbụ, ị ga-eche banyere usoro mmemme ndị arụnyere na kọmpụta ọ bụla na ngwaahịa NVIDIA.
Ọtụtụ mgbe, esemokwu na-ebili n'oge 3D ntọala ndịna-emeputa ma ọ bụ na-edegharị aha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, na ihe omume vidiyo vidiyo, ihe ọ bụla na-akwadoghị, mana achọrọ ha na ngwa ma ọ bụ egwuregwu. A esemokwu na-eme ma ọkwọ ụgbọala nwere nkwarụ. Ihe ngwọta kachasị mfe maka nsogbu a bụ iji tọgharịa ntọala na ndabara. Emere nke a n'ụzọ dị nnọọ mfe.
Pịa bọtịnụ òké aka na desktọọpụ. Na windo na-egosi, họrọ "NVIDIA Control Panel". Mee otu pịa.
Mgbe nke ahụ gasịrị na taabụ Nhọrọ 3Debe anyị na-ahọrọ "Jikwaa Ntọala 3D". Na windo na-egosi, ị ga - pịa "Weghachite".
Usoro dị otú ahụ dị mfe mgbe ụfọdụ nwere ike ịdị irè. Otú ọ dị, n'ịdị mma, ọ dị mkpa ịmara na nrụpụta nke ọkwọ ụgbọ ala site na ntinye akwụkwọ ma ọ bụ 3D mere nanị n'oge ụfọdụ na ụfọdụ ngwa ma ọ bụ egwuregwu, nke bụ ihe na-egosikarị esemokwu n'etiti onye ọkwọ ụgbọala na ngwanrọ.
Nzọụkwụ 4: Hazie TDR
Ngwá ọrụ Windows ọ bụla nwere usoro TDR wuru. Ọ dị ịrịba ama na ọ nwere ike ịmaliteghachi ọkwọ ụgbọala mgbe ọ naghị anabata arịrịọ. Kpọmkwem na nke anyị, ọ dị mkpa iji gbalịa ime ka oge nzaghachi site na kaadị vidiyo dị. Iji mee nke a, anyị ga-emepụta faịlụ pụrụ iche nke anyị ga-ede ederede ndị dị mkpa. Ekwesiri ighota ya ngwa ngwa na ogagh ekwe omume iji usoro a n'otu uzo, dika enwere ike inwe nsogbu na njiri ihe ntaneti vidiyo.
Ya mere, buru ụzọ gaa ngalaba Gbaa ọsọ, maka ụdị isi ihe a "Merie R". Na windo na egosiputa "regedit". Wee pịa "OK".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-agafe ụzọ na-esonụ:
Ugbu a ịkwesịrị ịlele faịlụ ahụ "TdrDelay". Ọ bụrụ na ọ bụ, mgbe ahụ mepee ma gbanwee njedebe oge. Ndabara nwere ike ịbụ nọmba ọ bụla, mee ka ọ gbanwee. Ọ kachasị mma ịgbanwe ya ruo 5 nzọụkwụ - ọ bụrụ na ọ bụ "10"gbanwee "15". Ọ bụrụ na ihuenyo acha anụnụ anyo amalite, ịkwesịrị ịtọ nọmba dị nta karị.
Ọ bụrụ na enweghị faịlụ dị otú ahụ, ị ​​ga-ebu ụzọ kee ya. Iji mee nke a, pịa aka nri na folda ahụ "GraphicsDrivers" na windo na-egosi, họrọ "Mepụta" - "DWORD uru uru 32".
A na-edegharị aha faịlụ ahụ "TdrLevel". Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike ịtọ ntọala efu na-abụghị zero.
Ọ bụrụ na ị na-etinye ntọala "0", mgbe ahụ anyị na-agbanyụ usoro TDR. A na-atụle nhọrọ a ma ọ bụrụ na mmụba na oge igbu oge enyeghị aka, wee jiri ya.
O kwere omume na okwu ahụ adịghị ma ọlị na sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ ọkwọ ụgbọala, mana na ngwaike n'onwe ya. Enwere ike iji kaadị vidiyo maka ogologo oge ma n'oge oge a kpamkpam ikpochapu ihe niile o nwere ike ime. Ma, maka mmalite, ọ dị gị mkpa ịnwale ụdị niile edepụtara n'elu. O kwere omume na ngwọta maka nsogbu ahụ dị n'ebe ha nọ.